Masar: Ugu yaraan 30 qof ayaa ku dhimatay - BBC Somali - Warar
Masar: Ugu yaraan 30 qof ayaa ku dhimatay
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 26 Janaayo, 2013, 11:03 GMT 14:03 SGA
Rabshado ka dhacay magaalada Port Saciid ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan soddon qof oo ay ku jiraan laba boliis iyo laba ciyaartooy, in kabadan saddex boqol oo qof ayaa ku dhaawacantay. Telefishinka Masar ayaa sheegay in dad mudaaharaadayay ay galeen saldhig boliis.
Dad ku mudaaharaadaya fagaaraha Taxriir
Rabshadaha ayaa ka dhashay markii Maxkamad ku taala Masar ay ku xukuntay labaatan iyo kow qof dil iyadoo lagu eedeeyay dhimashada in ka badan toddobaatan qof oo ku dhintay garoonka kubada cagta ee Port Saciid ee sanadkii hore.
Waxaa jiray farxad qaylo oo ay dadkii maxkamadda ku jiray ay sameeyeen markii lagu dhawaaqay xukunka. Laakiin reerkii iyo taageerayaasha dadka la xukumay ayaa isku dayay inay galaan xabsiga ay nimanka ku xiran yihiin. Laba boliis ayaa lagu dilay iska horimaadyo.
In kabadan lixdan qof ayaa lagu qaaday dacwad, iyadoo loo haysto dilkii garoonka kubada cagta ee dhacay kadib ciyaar naadiga Port Saciid iyo naadi ka socday Qaahira. Dhowr boliis ayaa lagu eedeeyay inay wax ka caawiyeen dhimashada dadka.